म्याग्दीकाे तातोपानीमा यस्तो चमत्कारिक दैविक शक्ति, लाखाैं खर्चेर निको नभएका विरामी केहि दिनमै फुरूङ्ग! – (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > म्याग्दीकाे तातोपानीमा यस्तो चमत्कारिक दैविक शक्ति, लाखाैं खर्चेर निको नभएका विरामी केहि दिनमै फुरूङ्ग! – (भिडियो हेर्नुस्)
म्याग्दीकाे तातोपानीमा यस्तो चमत्कारिक दैविक शक्ति, लाखाैं खर्चेर निको नभएका विरामी केहि दिनमै फुरूङ्ग! – (भिडियो हेर्नुस्)
admin October 12, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति, भिडियो	0
नेपालको म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट ८ किमी टाढा एउटा यस्तो प्राकृतिक उपचार केन्द्र अवस्थित छ जसको नाम सिंगा तातोपानी कुण्ड भनेर जानिन्छ। अजिब किसिमको बिरे नुनको गन्द आउने तातो पानी कसैले तयार पारिएको पक्कै पनि होइन तर यो चमत्कारी शक्ती जमिन भित्रबाट निस्कीएको हो । तातो पानीमा सल्फरको मात्रा पाइन्छ र यस पानीले रोगको किटानुलाई मार्दो रहेछ जसको तापक्रम ४८ डिग्री सेल्सिएस छ ।
गहिरो कुण्डमा पुरुष र महिलाहरु फरक फरक समयमा डुबुल्की मारी रहेका देखिन्छन । आगोमा पानी तताउदा उब्लेको तातो पानी बाट निस्किरहेको बाफ जस्तै कुण्डबाट तातो बाफ उडिरहेको हुन्छ । महिला र पुरुषहरु कुण्डको पानी भित्र मज्जाले डुबी रहेका छन् उनीहरुको अनुहारबाट पसिनाको धारा बगिरहेको देखिन्छ उनीहरुलाइ हेर्दा खेरी पानीमा होइन चर्को घामको तापमा बसीरहेका छन् ।
केही बेर कुण्डको तातो पानीमा बसी सके पछी बिरामीहरु कुण्डबाट बाहिर निस्कन्छन् र टाउको ढाकेर गुफ्फिन्छन् । जब उनीहरुले कम्वलबाट शरीर देखाउँछन्, उनीहरुको शरिरवाट पसिनाको बगिरहेको हुन्छ । यस्तो लाग्छ की जब पसिनाका धारा शरीरबाट बग्न सुरु हुन्छ उनिहरुको रोग पनि संग संगै पखालीरहेको छ जस्तो ।
ल’डेर शरिरको तल्लो भाग नै नचल्ने खालका बिरामीहरु बिभिन्न् हस्पिटल हरुमा लाखौ खर्च गरी निको न हुदा यसै कुण्डमा आएर निको भएर फर्किन्छन। कुण्डमा ३५ दिन भन्दा बढि समय लगातार डुब्ने बिरामी हरु हिडेर घर फर्किने कर्म पनि जारी छ । हस्पीटलमा करोडौं खर्च गरेर पनि निको नभएको रोग यहा आएपछि निको भएको देखिन्छ । पक्कै पनि यो प्रकृतिको चमत्कार भन्ने की एक पटक पुग्ने पन्ने म्याग्दी तातो पानी ।
बाकी भिडियो आफै बोल्छ हेर्दै जानु होला:
सात महिनाको गर्भ बोकाएर केटो फरार, पन्ध्र महिनाकि भइन छोरी श्रीमान बेखबर! – (भिडियो हेर्नुस्)
फेरि उत्तर कोरियाली शाषक किम जोङ बारे फैलियो यस्तो पत्याउनै नसकिने हल्ला (भिडियो हेर्नुस्)
कोरोनाले दियो यस्तो! घर छाडेर हिँडेका गोपाललाई ३० बर्षपछि आयो यस्तो खुशी!